कस्तो छ नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान तयारी? :: निर्मला घिमिरे :: Setopati
कस्तो छ नेपाल एयरलाइन्सको साउदी उडान तयारी?
नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) ले साउदी अरेबियाका लागि नियमित उडान अनुमति पाएको छ। साउदीको जनरल अथोरिटी अफ सिभिल एभिएसन (जिएसिए) ले यही फागुन २२ गते निगमलाई औपचारिक रूपमा उडान अनुमति प्रदान गरेको हो।
निगमले साउदीका तीन सहर (दमाम, रियाद र जेद्धा) मा उडान अनुमति पाएको छ। आउँदो अप्रिलदेखि नै निगमले उडान सुरू गर्ने तयारी गरेको छ। पहिलो चरणमा काठमाडौं–रियाद–काठमाडौं उडान गर्ने तयारी गरिएको निगमकी प्रवक्ता अर्चना खड्काले जानकारी दिइन्।
'पहिलो चरणमा हामी रियादमा साताको तीन उडान गर्ने तयारीमा छौं,' प्रवक्ता खड्काले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'कुन कुन बार र कति कति समयमा उडान गर्ने भन्ने सन्दर्भमा छलफल भइरहेको छ।'
अब निगमले साउदीमा सम्पर्क कार्यालय पनि विस्तार गर्ने उनले जानकारी दिइन्।
निगमले झन्डै चार वर्षअघि जापान, कोरिया र साउदी अरेबिया उडान गर्ने उद्देश्यले वाइडबडी जहाज ल्याएको थियो। केही समय अघिदेखि साउदीमा उडानका लागि प्रक्रिया सुरू गरे पनि जिएसएको टुंगो लाग्न सकेको थिएन। साउदी उडानका लागि जेद्धास्थित एम/एस फैसालिआ मोडर्न एभिएसनलाई जिएसएमा छनोट गरिएको निगमले जनाएको छ। साउदी सरकारबाट अनुमति पाएसँगै उडानका लागि बाटो खुलेको हो।
प्रवक्ता खड्काका अनुसार अरू मुलुकमा अनुमति लगायत अन्य प्रक्रिया पूरा नभएकाले उडान भर्न सकिरहेको छैन।
'जापानको ओसाका र नारितामा भने उडान गर्ने तयारी गरिरहेका छौं,' प्रवक्ता खड्काले भनिन्, 'चीनको गोन्जाओमा पनि छिट्टै उडान गर्ने तयारी भइरहेको छ।'
साउदी अरेबियाको भने सबै प्रक्रिया सकिएकाले यसनिम्ति निगमले जहाज तथा कर्मचारी व्यवस्थापन लगायत तयारी गरिरहेको उनले बताइन्।
'यो रूटमा विशेष गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने नेपालीहरूलाई लक्षित गरिएको छ,' उनले भनिन्।
साउदी नेपाली श्रमिकहरूको मुख्य गन्तव्य मुलुकमध्ये एक हो। यहाँ तीनलाख भन्दा बढी नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर रोजगारीमा आबद्ध छन्। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांकअनुसार रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर मासिक दस हजार बढी नेपाली त्यहाँ पुग्ने गरेका छन्। गत माघमा मात्रै १४ हजार दुई सय ४१ नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर साउदी पुगेको देखिन्छ।
'यसले गर्दा पनि अब वैदेशिक रोजगारीका लागि साउदी जाने नेपाली लाभान्वित हुने अपेक्षा छ,' प्रवक्ता खड्काले भनिन्, 'नेपालीहरूले अब आफ्नै राष्ट्रिय ध्वजावाहक जहाजमा आवतजावत गर्न पाउने भएका छन्।'
हाल साउदीमा नेपालको निजी अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनी हिमालयन एयरलाइन्सले नियमित उडान गर्दै आएको छ। निगमले उडान थालेपछि वायुसेवा कम्पनी र उडान तालिका थपिएसँगै यो गन्तव्यको भाडा दर पनि सस्तिने अपेक्षा गरिएको छ। तर निगमले हाल भाडाको विषयमा के कति तय गर्ने भनेर निर्क्यौल नगरिसकेको उनले बताइन्।
वाइड-बडी किन्दा निगमले जापान, कोरिया, साउदी अरेबिया जस्ता मुलुकमा उडाउने भने पनि स्वीकृति भने थिएन। कतिपयसँग हवाइ-सेवा सम्झौता भए पनि उडान अनुमति थिएन। युरोपमा त निगम कालो सूचीमा थियो। अहिले पनि छ।
वाइड-बडी आएपछि पनि निगमले लामो समयसम्म ती मुलुकमा उडाउने स्वीकृति पाएन। वाइड-बडी कि त खाली बसे कि क्षेत्रीय बजारमा उडे।
हाल निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि छ वटा चिनियाँ जहाज र अरू तीन वटा साना जहाज छन्। चिनियाँ जहाजबाट घाटा भएपछि निगमले ती जहाज थन्क्याएको छ। निगमले अन्तर्राष्ट्रियतर्फ दुई वाइड-बडी, दुई न्यारो-बडी र एक बोइङमार्फत भारत, युएई, हङकङ, मलेसिया, कतार लगायत मुलुकमा उडान भर्दै आएको छ।
यसमध्ये एउटा न्यारो-बडी जहाज पनि इञ्जिनमा समस्या आएर दुई महिनादेखि कतारको दोहा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्किएको थियो। गत पुस १३ गतेदेखि बिग्रिएर थन्केको उक्त न्यारो-बडी जहाज भाडाको इञ्जिन जडान गरेर हालै नेपाल ल्याइएको निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीले जानकारी दिए।
उनका अनुसार निगमको न्यारो-बडी ए ३२० विमानको (एन–एकेडब्लु) काठमाडौं–दोहा नियमित उडानका क्रममा पार्किङ वेमा इञ्जिनमा समस्या देखिएको थियो।
'उक्त जहाज नेपाल ल्याउन ग्लोबल टेन्डरमार्फत कम्पनी छनोट गरेर तीन महिनाका लागि भाडाको इञ्जिन जडान गरेर नेपाल ल्याइएको हो,' उनले भने। निगमले नेदरल्यान्ड्सको एमटियु मेन्टिनेन्स लिज सर्भिसेज बिभी कम्पनीमार्फत इञ्जिन भाडामा लिएको हो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन २३, २०७८, १९:२६:००